दुर्घ टनापछि सरकारी अस्पताल पुर्याइएकी बालिकाको ला श भुस्याहा कुकुरले सकडमा तानिरहेको देखिएपछि ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दुर्घ टनापछि सरकारी अस्पताल पुर्याइएकी बालिकाको ला श भुस्याहा कुकुरले सकडमा तानिरहेको देखिएपछि !
काठमाडौं । दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको लाश कुकुरको पहुँचमा भएको खुलेको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको सरकारी अस्पतालबाट यस्तै एक भिडियो बाहिर आएको छ । राज्यको पश्चिमी भागको सम्भल जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा कुकुरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएकी एक नाबालिग बालिकाको लाश खान खोजेको देखिएको छ ।
भिडियो बाहिर आएपछि मानिसहरु रिसाएका छन् । बिहीबार यस्तो घटना भएको हो । जानकारी अनुसार सडक दुर्घटना पछि बालिकालाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । यो स्पष्ट हुन सकेको छैन कि ति बालिकाको मृत्यु अस्पतालमा भयो वा ल्याउनु भन्दा अघि नै भएको थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल २० सेकेन्डको भिडियो क्लिपमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ कि कुकुरले सेतो कपडाले ढाकिएको शरीर लुछ्न खोज्दैछ । लाश अस्पतालमा मात्र सीढीको मुनि स्ट्र्रेचरमा सुनसान ठाउँमा राखिएको छ । समाचार एजेन्सी एएनआईसँग बालिकाका बुबाले भने, ‘कसैले पनि झण्डै २ घण्टा सम्म मेरी छोरीलाई हात लगाएका थिएनन् ।
यो अस्पतालको लापरवाही हो ।’ यता अस्पताल प्रशासनले त्यहाँ आवारा कुकुरहरु को एक खतरा रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ । अस्पतालले यसका लागि स्थानीय अधिकारीलाई पत्र दिइएको तर यसमा कुनै कारबाही नभएको जनाएको छ । यद्यपि अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले उनलाई यो मुद्दामा दोष दिन नसकिने दाबी गर्छन ।
अस्पताल प्रशासनले बालिकाको परिवारले लाशको परीक्षण रिपोर्ट नचाहेकोले लाश अन्त्येष्टिका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो भनेको छ । आफन्तहरुले अस्पतालबाट लाश लिएर बीचमा छोडेपछि यस्तो घटना भएको अस्पतालको दाबी रहेको छ ।
यस विषयमा कारबाही गर्ने क्रममा अस्पताल व्यवस्थापनले एक सफाई कर्मचारी र एक वार्ड केटालाई निलम्बित गरेको जनाएको छ । राज्यमा रहेका विपक्षी दलहरुले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको विरोध गरिरहेका छन् । स्रोत